श्रावण २१, २०७६ रामजी ज्ञवाली
काठमाडौँ — जब आर्यन सिग्देलको चलचित्र उद्योगमा प्रवेश भयो, त्यही बेलादेखि उनी माथि २ वटा ट्याग लाग्यो-ड्रंकर र लेडी किलर । लभ स्टोरी विधाका चलचित्रमा धेरै पारिश्रमिक लिने महँगा नायकको रुपमा समेत चिनिए आर्यन ।
उनलाई चुजी र घमण्डी हिरोको समेत संज्ञा दिइयो। यद्यपी, आर्यनले आफूमाथि लागेका ट्यागहरुलाई विस्तारै गलत साबित गर्दै गए। लभ स्टोरी विधाका चलचित्रबाट धेरै युवतीको 'दिवाना' बनेका आर्यनको फ्यान फलोइङ अहिले पनि उत्तिकै राम्रो छ। निर्माता तथा निर्देशकको नजरमा उनले गहिरो छाप छोडेका छन्। उनी धेरै चुजी थिए, अहिले सकेसम्म राम्रा चलचित्र नछोड्ने मुडमा छन्। उनै आर्यनसँग यसपटक भिन्न विषयवस्तुमा रहेर रामजी ज्ञवालीले गफ गरे- महिला वार्ता।
तपाईंको जीवनमा महिलाले कत्ति प्रभाव पारेका छन्?
अहिलेसम्म धेरै महिलाको संगत गरियो। सानो छँदा दिदीबहिनी, स्कुल जान थालेपछि केटी साथीहरु, क्याम्पस पढ्न थालेपछि पनि धेरै युवतीसँग हिँड्डुल भयो। कुराकानी भयो। म सानैदेखि टेलिभिजन हेर्ने भएकाले स्क्रिनमा देखिने महिला क्यारेक्टरहरुप्रति पनि ध्यान जान्थ्यो। यहाँसम्म आइपुग्दा अनेकखाले महिलाले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा प्रभाव पारेका छन्। तर, यस्तो युवतीको कारण जीवननै फेरियो भन्ने भएन।
जीवनमा पहिलोपटक भेटेको महिला चिन्नुहुन्छ?
मलाई लाग्छ, मम्मी (शारदा) सिग्देल नै हुनुन्छ।
स्कुल पढ्ने बेलामा एकदमै मिल्ने महिला साथीलाई याद गर्नुभएको छ?
कक्षा ८ मा पढ्ने बेलामा यमुना तामाङ भन्ने एकजना हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग अलिकति नजिक थिएा। अरुलाई चिनेपनि खासै नजिक हुन सकिएन।
तपाईंको जीवनमा सबैभन्दा धेरै सहयोगी महिला को हुनुन्छ?
मेरी श्रीमती (सपना) हो। उनको सहयोग कसरी बयान गर्न सक्छु र? जब उनी मेरो जीवनको म्यानेजर बनेर आइन्, असम्भव धेरै कुरा सम्भव भए। जीवनले नयाँ मोड लियो। त्यो भन्दा धेरै ठूलो कुरा मलाई सधैं खुसी बनाएर राख्न सकेकी छिन्।
सबैभन्दा धेरै माया लाग्ने युवती को होला?
माया त मम्मी, श्रीमतीको पनि नलाग्ने होइन। तर, मलाई मेरो बहिनी यशोदा सिग्देलको असाध्यै धेरै माया लाग्छ।
कस्ता युवती देख्दा झर्को लाग्छ?
पतर-पतर बोलेको बोलै गर्ने युवती देख्न पनि रुचाउन्न। कोही भेटियो भने ज्वरो आउँछ। धेरै पटक त म बिचमै आफ्नो बाटो लागेको पनि छु।
सबैभन्दा धेरै सपनामा आउने युवती को होला?
एन्जेलिना जोली हुन्। म अहिले विवाहित हो। तर, अविवाहित हुने बेलामा समेत एन्जेलिनाले सपनामा आएर तनावै पारिन्। खै, किन सपनामा आइरहनुपरेको, भेट भयो भने पक्कै सोध्नेछु (हाहाहा...)
कल्पनामा आइरहने महिला चाहिँ?
म विवाहित भएकाले कोही युवतीबारेमा कल्पना नै गर्दिनँ।
पहिलोपटक डेट गएको युवतीको सम्झना छ?
नाम त भन्न मिल्दैन। तर, कक्षा ११ मा पढ्ने बेलामा एकजना युवती हुनुहुन्थ्यो।
यो प्रेम किन सफल हुन सकेन?
होइन, त्यो बेलाको खासै धेरै कुरा नगरौं। तर, हामी समझदारीमै छुटेका हौं।
अहिलेसम्म कति युवतीलाई लभ लेटर लेख्नुभयो याद छ?
नढाटेरै भन्ने हो भने आजका मितिसम्म कुनै युवतीलाई लभ लेटर लेखेको छैन। अहिले मेरो श्रीमती सपनासँग पनि लभ म्यारिज हो, तर उनीसँग पनि लभ लेटर नलेखेरै बिहे भयो।
पहिलोपटक लभ लेटर कसले लेख्यो?
मैले पाएको छु, तर मैले त्यो बेलामा पनि भेटेरै जवाफ दिन्थेँ।
विवाहित भएपनि निकै हृयाण्डसम हुनुहुन्छ, कोही युवतीले अहिले पनि बिहेको प्रस्ताव राखेका छन्?
गरेका छन्। सामान्य प्रस्ताव गर्नेहरुलाई खासै रेस्पोन्स गरेको छैन, अति गर्नेलाई राम्रैसँग सम्झाएको छु।
बिहे भएपछि यस्तो युवती पाएँ भने दोस्रो बिहे गर्थे भन्ने कोही छ?
छैन। अर्को कुरा त्यस्तो नकारात्मक कुरा मैले सोचेको पनि छैन।
डेटमा जान मन लागेको युवती?
संसारकी सबैभन्दा सुन्दर महिला को लाग्छ?
जतिबेला कुरा भइरहने महिला?
मेरो बहिनी र श्रीमती।
ड्रेस सेन्स भएकी युवती?
आजभोलिका युवतीहरु सबै चिटिक्क परेर हिँड्छन्। सबै सुन्दर लाग्छन्।
अहिलेसम्म धेरै महिला क्यारेक्टरसँग एक्टिङ गर्नुभयो, सबैभन्दा मन पर्ने महिला क्यारेक्टर?
अभिनयका हिसावले र दर्शकले मन पराएको जोडिको हिसावले नम्रता श्रेष्ठ नै होला।
कुनै महिलाले दिएको जिन्दगीभरी बिर्सन नसकिने गिफ्ट?
मेरो श्रीमतीले वैशाख ६ गते जिन्दगीभरी नबिर्सने गिफ्ट (सन्तान) दिएकी छिन्। सायद यो भन्दा धेरै महत्वपूर्ण गिफ्ट के होला र?
प्रकाशित : श्रावण २१, २०७६ १४:०७